Ebee ka aha 10 distros Linux kachasị ewu ewu si? | Site na Linux
Ọchịchọ ịmata ihe Etymology nke 10 Linux kachasị ewu ewu? Ọfọn, mụ onwe m ... achọpụtara m azịza ya na ozi magburu onwe ya Alt1040.
N'etiti ụdị Linux dị iche iche anyị na-ahụkwa ọtụtụ aha dị iche iche na-achọkarị ịme ka anyị chee echiche ihe kpatara mmadụ ga-eji kpọọ ụdị aha ahụ?
7 Mint Linux
Debian Emepụtara ya na 1993, site na Ian Murdock, aha ahụ n'onwe ya bụ egwuregwu na okwu; ebe ọ bụ na e kere ya dị ka nkwekọrịta nke aha enyi nwanyị ya n'oge ahụ (ọ bụ nwunye nwunye ugbu a), Debra na nke gi, Ian. Kedu ụzọ dị mma iji gosipụta nwa agbọghọ ịhụnanya gị karịa ịmepụta aha distro na aha ya?
Sabayon bu distro nke amuru na Trento, Italy ma kpo aha ya dika nri ndi Itali nke ana akpo Zabaglione, nke ejiri akwa nko, sugar na mmanya. N'ezie, ọ bụ ihe eji megharịa ọnụ marakwa na Latin America; na Argentina ha na-akpọ ya "sambayón" na Colombia "sabajón".
A maara nke a distro dị ka Linux Mandrake, nke MandrakeSoft nọ na-arụ ọrụ, ụlọ ọrụ tụfuru agha iwu banyere aha "Mandrake" - nke bụ nke Hearst Corporation. Oge ụfọdụ mgbe e mesịrị, Connectivia zụtara MandrakeSoft, nsonaazụ nke njikọ ahụ bụ Mandriva.
OpenSUSE bụ ọrụ obodo SUSE, nke Novell na AMD na-akwado. SUSE bụ nkọwa okwu na German maka "Software Und System Entwicklung" -software na sistemụ mmepe. Ekwuola na ọ bụ ụtụ nye engineer German - ọkachamara na kọmpụta - Konrad Zuse.
E nwere nsụgharị ọrụ atọ maka ihe kpatara aha distro a:
Ulo uhie na-abụkarị ihe nnọchianya nke nnwere onwe na mgbanwe; n'ezie na ọ bụ ndị so na mgbanwe nke French buuru ha, a Okpu Phrygian.
Marc Ewing, onye nchoputa nke RedHat, nwere njikọ pụrụ iche maka okpu uhie ma were otu n'ime ha - nke bụ onyinye nna nna ya - mgbe ọ na-agụ akwụkwọ na Carnagie Mellon, ebe a na-akpọ ọrụ ọ bụla ọ malitere aha mgbe ihe ọ malitere. " Uhie okpu ". Yabụ nhọrọ nke "Red Hat Linux" bụ ihe ezi uche dị na ya.
Akụkọ Marc kwughachiri onwe ya ma n'ụzọ dị iche. Na kọleji, mgbe mmadụ nwere nsogbu na kọmpụta ha, ha gara na ngalaba IT, ebe onye ọ bụla kwuru na ha ga-agwa "nwata ahụ na okpu uhie." Marc ghọrọ onye ama ama idozi igwe ndị ọgbọ ya - ma nweta obere ego na usoro a - n'eziokwu ọ ghọrọ onye ama ama na oge, na mahadum ya, na-ekwu na mmadụ bụ "okpu uhie" bụ otu na onye nwere ihe ọmụma teknụzụ.
Fedora Ọ bụ oru ngo nke obodo mere ma nwee nkwado site na RedHat, aha "Fedora" sitere na aha ụdị okpu nwere silhouette nke akara ngosi RedHat. Ọ bụ ụzọ dị mfe ndị obodo Fedora si kwuo "ndị a bụ mmalite anyị, mana anyị bụ ihe ọzọ."
Linux Mint bụ websaịtị raara nye Linux nke nwere nkuzi na isiokwu metụtara sọftụwia na - akwụghị ụgwọ. N'oge ahụ ọ bụghị distro. Mint bụ aha dị mfe icheta na nwetụrụ ihe na-echetara ọhụụ nke metụtara penguins, Linux mascot gọọmentị.
Gentoo bu nkesa dabere n’uzo zuru ezu, gini ka nka putara? nke ọma, nke a pụtara na a chịkọtara ihe niile site na ncha, nke na-enyere aka ịme ya ngwa ngwa. Ọ dị ka ịme uwe omenala. Ka o sina dị, eziokwu ahụ bụ na ọ dị ngwa mere ka nke a gbanwee aha ya (nke a na-akpọbu ya Inọk) na Gentoo, ụdị penguuin nke na-agba ọsọ ngwa ngwa (Pygoscelis papua, gentoo penguuin na bekee).
Nke a mepụtara distro a Patrick Volkerding, na mbu dika obere oru; n'eziokwu, na-anwa ime ka ọ ghara ịdị mkpa, o kpebiri ịkpọ ya slack. Gịnị kpatara ya? You hụrụ, Patrick bụ onye otu chọọchị nke SubGenios, a okpukpe parody na-adabere na nkà ihe ọmụma ya na-achọ slack, echiche nke nnwere onwe, nnwere onwe na echiche mbụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, aha ahụ rapaara, nsonaazụ ya bụ nkwekọrịta nke slack na ngwanrọ.
Nke a bụ - n'enweghị obi abụọ ọ bụla - ọgba aghara a kacha mara amara n'oge a ma eleghị anya ihe aha ya pụtara abụghị ihe nzuzo maka onye ọ bụla n'ime unu, dị ka ibe gọọmentị si kwuo:
“Aha nkesa a sitere n'echiche Zulu na Xhosa nke ubuntu, nke pụtara mmadụ ịbụ onye ọzọ ma ọ bụ m bụ n'ihi na anyị bụ. Ubuntu bụ ndọrọndọrọ ọchịchị South Africa nke Bishop Desmond Tutu bụ onye isi, onye nwetara Nrite Nobel Udo na 1984 maka mgba ya na apartheid dị na South Africa. "
Mark Shuttleworth, onye na-ahụ maka ọrụ a, maara echiche dị ugbu a ma kpebie iji oge ahụ kwalite echiche nke Ubuntu. N'ihi ya, ojiji nke aha a, nke na - egosiputa - n'ọtụtụ ọkwa - ụkpụrụ nke obodo ngwanrọ ọ bụla n'efu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Ebee ka aha 10 distros Linux kachasị ewu ewu si?
Obere oge ihe dịka otu ọnwa gara aga, ahapụrụ m Ubuntu, usoro dị ukwuu, dị mfe iji, enwere ike ịhazi ya, rue mgbe ha gbanwere desktọọpụ ha na Unity, ọ bụ mgbe ahụ ka m gbanwere Fedora Lovelock nke na-eji Gnome 3 ma m hụrụ ya n'anya. ebudatara na ọsọ dị elu ma kwụsie ike, yabụ ọ na - esiri m ike ịlaghachi Ubuntu otu ụbọchị. Otú ọ dị Ubuntu bụ nnukwu distro maka m ma n'ezie, m na-ebu nkà ihe ọmụma ya mgbe niile.
Zaghachi Rockston Backston
Edemede ahụ dị ezigbo mma, dịkwa ka ndị ọzọ, a na m achọ ịghọta nkọwa aha ARCH, n'aka nke ọzọ a Iụrụ m iyi na Fedora bụ aha nwanyị Russia.
"A zụtara maka zụta"
Ọ bụghị maka ịgha kama ị kwesịrị ị mezie ahịrịokwu a.
Ihe gbasara Arch na-eche ntakịrị ihe nwere ike ịbụ n'ihi na ụmụ nwoke bidoro ụta ịchụ nta site na tropo narị puku afọ gara aga ma ọ bụ site na ndị na-ewu ụlọ, ha chere ọtụtụ ihe karịa anyị, ị ga-ahụ na ha jidere nkume na-enweghị simenti ma ọ bụghị ha daa, dịka ọmụmaatụ, na Aqueduct nke Segovia. Akara abụghị maka ndị mmadụ bidoro ị ga-anọ ya otu ịchọrọ, ọ bụ ya mere ha ji chọọ icheta otu ihe ahụ
I meela otu n'ime ihe kachasị mma ị ga - eme, hapụ Mierdow $ n'efu ma gbanwee gaa na Linux
See hụrụ, ihe Russia nwere njikọ aha aha "blonde" nke Mandriva.
Agwara m Malcer ihe kpatara aha ahụ ebe ọ bụ na anaghị m enwe mmasị na blondes na edere m edemede banyere ya, ana m ahapụ gị:
Ezigbo mmadu. Nke a bụ azịza izizi m na Blog.
Laghachi ebe aha ARCH distro si, ikekwe o sitere na mkpịsị okwu Bekee a na-akpọ Architecture (ije) ma ọ bụrụ na ị hụrụ nke ọma, akara distro nwere ọdịdị yiri Katidral.
Ọ bụ naanị echiche.
N'ịchọ ịmata na ma na ihe kpatara aha Ubuntu ahụ, Mark Shuttleworth n'onwe ya gosipụtara na nke a "abụghị ọchịchị onye kwuo uche ya" (na nzaghachi nye ọtụtụ arịrịọ banyere ngwa nke Ubuntu kwesịrị ịgụnye na ndabara) ...
Ndewo, post ahụ na-atọ ụtọ. Naanị nkesa 10 ahụ (dị ka DistroWatch) abụghị ndị kachasị ewu ewu ... enwere m ndakpọ olileanya na m hụ Arch: '(
Ọ bụ eziokwu ... Arch na-efu ... ebe ahụ ka anyị gbagoro. Ebee ka ihe Arch si puta? Have nwere echiche ọ bụla?
Na-akpali mmasị, M gụrụ ya kpamkpam ...
Naanị ihe ga-agbazi bụ na Sambayón nwere yolks ma yabụ agba odo
Amaghị m, aga m eche na n'asụsụ Spanish ọ ga-abụ ihe dịka Archi-Linux, Linux dị oke mkpa ma ọ bụ dị ike hahaha xD
Daalụ! Gbazie. 🙂
Ha ha! Gbazie. 🙂
Enwere m mmasị na m nwere ike ịgụ nkọwa niile nke aha nke distros, mgbe ụfọdụ a na-ahụghị nkọwa ahụ, nke nwere ike bụrụ isi ihe dị iche iche dị iche iche!
Ọ dịchaghị mma maka ozi niile edere na ibe ndị a ebe ọ bụ na ya na ị nwere ike ịkọwa obi abụọ, ọ dị ezigbo mma
Zaghachi na crakin03
Carlos Ortiz M. Ihe dijo
Debian bụ ndụ.
Zaghachi Carlos Ortiz M.
Ihe kacha mma bụ Debian, ihe ọ bụla ha kwuru 🙂
Gwa m site na nkwenye sitere na Arch plss
Etu esi etinye ngwugwu LMDE na sekọnd 3